I-SUKOON (Chowkhamba): Indlu esemaphandleni yentsapho etofotofo - I-Airbnb
I-SUKOON (Chowkhamba): Indlu esemaphandleni yentsapho etofotofo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSushil
IChowkhamba yinxalenye yeSukoon, ikhaya elizolileyo eSatoli, kwiKumaon Himalayas. Ilali, kwi-6000 yeenyawo, inemozulu epholileyo epholileyo, ihlobo elimnandi kunye nobusika obubandayo. Eli hlathi likhusi le-Himalayan nezinye iintaka ezifudukayo.
Yenzelwe abo banqwenela ukuba bodwa okanye inkampani ekhethiweyo. Samkela, abacinga, iintanda-bulumko, abapeyinti, ababhali, iimvumi, okanye nabani na ofuna ikhefu kubomi basezidolophini. Indawo yokubaleka egqibeleleyo kusapho olunqwenela ukufumana indlela entsha yokuba kunye.
Eli likhaya elibalekayo elinekhitshi elitofotofo nendawo yokutyela enamagumbi okulala amabini, amagumbi okuhlambela ayi-1.5 kunye nebhalkoni enkulu enembonakalo enkulu yentlambo kunye neHimalayas. Onke amagumbi akhanya kakuhle, aphuma umoya ibe atofotofo. Le ndlu inamanzi abandayo namanzi ashushu. Ubushushu obongezelelweyo bunokuvela kwii-heater zombane. Kukho iihektare eziyi-5 zomhlaba onamahlathi ngaphakathi kule ndlu. Inezinye izindlu ezisemaphandleni eziyi-4 ezikufutshane, zonke ziyimfihlo.
Iimbono ezingahambelaniyo zombindi weHimalaya. Beka kwihlathi le-oki elichumileyo. Gubha ngamanzi acocekileyo entwasahlobo unyaka wonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Sushil
Ndihlala ndihamba. Ndiyafumaneka efowunini xa uqhagamshela. UHarish ngumfowunelwa wasekhaya kwaye uya kunceda ngolungiselelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nainital